Kaadị egwuregwu nweela ha ewu ewu ọtụtụ iri afọ gara aga. Ndị a dị mfe na-ebu na mfe na-play egwuregwu ndị tupu isi iyi nke ntụrụndụ na ochie ụfọdụ. Otú ọ dị ụwa ghọrọ usoro ngwa ngwa na otú anyị Ịgba Cha Cha mkpa. Ugbu a ụbọchị anyị smart ntị a n'ụlọ a ọgụgụ nke egwuregwu nke dị iche iche Genres ma kaadị egwuregwu ndị ka ọtụtụ ndị si mmasị. Idebe mmasị a n'uche, dị iche iche kaadị egwuregwu e mepụtara nnọọ. Ị nwere ike n'ụzọ dị mfe inwe ndị a kaadị egwuregwu n'ihi na android si android play ụlọ ahịa.
Ebe a bụ obere ndepụta nke ụfọdụ ndị kasị mma kaadị egwuregwu n'ihi na gị smart igwe na 2015:
Ọ bụ nnọọ mfe na-egwu kaadị egwuregwu ebe ọnụ ọgụgụ nke bullheads na kaadị ikpebi isi. Na-eto eto bụ ọkpụkpọ onye natara kacha nta ọnụ ọgụgụ nke bullheads. Ọ bụ a zuru okè egwuregwu igbu oge ebe chioma a na-ewere dị mkpa karịa atụmatụ.
Ascension bụ a pụrụ iche fantasy egwuregwu ebe kaadị na-nyere na-akparaghị ókè ike. Ọkpụkpọ nwere na-ewu a oche nke kaadị na agha na ndị iro ha. Dị iche iche mmelite nke a Ịgba Cha Cha ngwa ama na e wepụtara nnọọ.
A ọzọ fantasy kaadị egwuregwu, oche Heroes agụnye a ọnụ ọgụgụ nke azum na i nwekwara ike kpọọ ya na offline mode. Na a multi-ọkpụkpọ nhọrọ, egwuregwu awade ya Player na a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ.
Egwuregwu a na-ewe kaadị egwuregwu na a dum ọhụrụ larịị. A pụrụ iche Nchikota dais na kaadị egwuregwu, ọkpụkpọ nwere ike họrọ 5 odide na ha ikike ga-triggered na ndabere nke kaadị ha na-enweta.
5.Hearth Nkume: Heroes nke Agha Nka
Ulo oru na mbubreyo 2014, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị echere kaadị egwuregwu n'ihi na android. Nanị mgbochi na egwuregwu bụ na ọ dị naanị maka igwe na ihuenyo size ibu karịa 6 sentimita asatọ. Ị nwere ike igwu megide ndị enyi gị ma ọ bụ inbuilt iro.
Dị iche iche mgbanwe nke ochie kaadị egwuregwu esesịn a tọhapụrụ na ahịa ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ na-egwu ochie ịke poker ahụ, e nwere ihe dị mma karịa egwuregwu a.
Ime Anwansi bụ otu nke kasị mma kaadị egwuregwu tọhapụrụ na 2015. Dabere na echiche nke fantasy, Ime Anwansi na-enye ohere ya Player kpọghee kaadị ozugbo ha Ọkwa elu.
Ahịa: $ 4.8
Otu n'ime nnọọ ewu ewu egwuregwu na Windows, Solitaire mere ka ya ụzọ n'ime android ụwa. Solitaire Mega Pack bụ mfe windows egwuregwu na ugbu a na packaged maka android. The iwu, ebumnuche na-emeputa niile bụ otu ihe ahụ dị ya omenala version maka Windows.
Ọzọ kaadị egwuregwu si mmepe nke Ascension, Star n'ụwa bụghị nanị na-agwakọta kaadị na fantasy ma ugbu a nakwa nwere Sci-Fi mmewere mmasị na ya. Na galaxy isiokwu, na interface nke egwuregwu a anya mara maa mma.
10.World Series nke Poker
Ọ bụrụ na ị bụ onye na diehard ofufe nke poker, mgbe ahụ, egwuregwu a ga-maa asatọ gị buds. Na multi-ọkpụkpọ nhọrọ, egwuregwu awade ọtụtụ ndị ọzọ na atụmatụ dị ka onye ndú mbadamba.
> Resource> emulator> Top 10 Kaadị Games maka Android